Mabasa 14 - பரிசுத்த வேதாகமம் [தமிழ் பைபிள் WBTC 2008] - (செயல் 14)
KuIkoniumu vakapinda vose pamwechete musinagogu yavaJudha vakataura zvokuti boka guru ravaJudha navaGiriki rakatenda.
Asi vaJudha vakanga vasingatendi vakaisa mweya wokupanduka mukati mevechirudzi vakavapengesa kuti varwise vehama.
Asi vanhu veguta iroro vakanga vakakamukana. Vamwe vaiva kurutivi rwavaJudha vamwe vari divi ravapositori.
Vechirudzi navaJudha navatongi vavo pavakanga vachironga kuvatambudza uye kuvataka namabwe,
vakazviziva vakatizira kuRisitira nokuDhebhe maguta enyika yeIkoniumu uye kunyika yakatenderedza.
Ikoko vakaparidza Shoko Rakanaka.
KuRisitira kwaiva nomumwe murume aingogara asingakwanisi kufamba namakumbo ake. Akanga ari mhetamakumbo chizvarirwo chake, asina kana kutombofamba.
Akateerera Pauro achitaura. Pauro akanyatsomutarisisa. Paakaona kuti ane chitendero chokuti angaponeswe
akataura nezwi riri pamusoro akati, “Simuka umire namakumbo ako.” Iye akakwakuka akafamba.
Mhomho yavanhu payakaona zvakanga zvaitwa naPauro yakadaidzira nechiRikaonia vachiti, “Vamwari vaburuka kwatiri vakaita savanhu.”
Bhanabhasi vakamuti ndiZeusi, Pauro, nokuti ndiye aiva mutauri mukuru, vakamuti ndiHeremesi.
Mupristi waZeusi aiva neTemberi pamberi peguta, akauya namadhonza uye anamaruva kumisuo mikuru achida kupira chibayiro pamwechete navanhu.
Vapositori, vanaBhanabhasi naPauro, pavakazvinzwa vakabvarura nguwo dzavo neshungu. Vakamhanya mumhomho yavanhu vachidaidzira vachiti,
“Varume, ko mavakuitireiko izvi? Tiri vanhuwo vakangofanana nemi uye tiri kukuunzirai Shoko Rakanaka tichikutaurirai kuti mutendeuke kune zvinhu izvi zvisina maturo muchienda kuna Mwari mupenyu akasika denga napasi negungwa nazvose zvirimo.
Muzvizvarwa zvakapfuura Mwari akabvumira marudzi ose kutevera maitiro avo.
Zvakadaro zvazvo haana kukusiyai musina zvinoratidza zvokuvapo kwake munezvinhu zvakanaka zvaanokuitirai. Anokutumirai mvura inobva kudenga, nemwaka yamaguta achikugutsai mwoyo nezvokudya nokufara.”
Kunyange namazwi aya vakange votoda kukundika kurambidza vanhu ava kupira chibayiro kwavari.
Asi kwakava navaJudha vakabva kuAndiyoku nokuIkoniumu vakafurira vanhu vakataka Pauro namabwe vakamuzvuvira kunze kweguta vachifunga kuti afa.
Vadzidzi pavakaungana paari, akasimuka akapinda muguta. Mangwana acho akaenda naBhanabhasi kuDhebhe.
Pavakanga vaparidza Dama Rakanaka muguta iroro vakava navadzidzi vazhinji vakadzokera kuRisitira nokuIkoniumu nokuAndiyoku
vachisimbisa vadzidzi vachivakurudzira kuenderera mberi nechitendero. Vaiti, kuti tipinde muumambo hwaMwari tinofanira kutopindamo nomumatambudziko akawanda.
Pavakavasarudzira vakuru vakuru musangano rimwe nerimwe vachinamata nokutsanya, vakavakumikidza kuna Tenzi wavakanga vakatenda maari.
Vakazopfuura nokuPisidhia vakasvika kuPamufuria.
Vakati vaparidza shoko muPeriga vakazodzika kuAtaria.
Pavakasvika vakaunganidza sangano vakataura zvose zvakaitwa naMwari achivashandisa uye kuti Mwari akanga azarura sei musuo wechitendero kune vechirudzi.
Vakagara ikoko navadzidzi kwenguva ndefu.
Mabasa 1 / செயல் 1
Mabasa 2 / செயல் 2
Mabasa 3 / செயல் 3
Mabasa 4 / செயல் 4
Mabasa 5 / செயல் 5
Mabasa 6 / செயல் 6
Mabasa 7 / செயல் 7
Mabasa 8 / செயல் 8
Mabasa 9 / செயல் 9
Mabasa 10 / செயல் 10
Mabasa 11 / செயல் 11
Mabasa 12 / செயல் 12
Mabasa 13 / செயல் 13
Mabasa 14 / செயல் 14
Mabasa 15 / செயல் 15
Mabasa 16 / செயல் 16
Mabasa 17 / செயல் 17
Mabasa 18 / செயல் 18
Mabasa 19 / செயல் 19
Mabasa 20 / செயல் 20
Mabasa 21 / செயல் 21
Mabasa 22 / செயல் 22
Mabasa 23 / செயல் 23
Mabasa 24 / செயல் 24
Mabasa 25 / செயல் 25
Mabasa 26 / செயல் 26
Mabasa 27 / செயல் 27
Mabasa 28 / செயல் 28